I-LIVEU IBC 2019 PREVIEW - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-LIVEU IBC 2019 PREVIEW
Indawo ye-LiveU - Hlala 3.B62
I-LiveU izoletha iphothifoliyo yayo yezixazululo ezinikezwe amandla ze-5G zokuhlanganisa izindaba ezibukhoma nokubukeka kwezemidlalo kuzo zonke izinhlobo zomcimbi. Uma ubheka imidlalo ye-2020 eTokyo, i-LiveU isivele isiza ukusekela amakhulu wamakhasimende ngeteknoloji ye-HEVC ewina imiklomelo.
Amaphuzu avelele e-IBC ahlanganisa:
DALA: amayunithi wensimu ye-HEVC 4K
I-LiveU's flagship ye-LU600 4K HEVC isisombululo sokudlulisela iphathekayo inikeza ividiyo engenasici ngekhono lokuhamba kahle komkhawulokudonsa. I-LU600 yakamuva ye-HEVC 4K-SDI iphethukisa ukusakaza kwe-4Kp50 / 60 yokukhiqiza okuphezulu, isekela i-VR kanye ne-360.
I-compact yethu, eqinile i-LU300 HEVC iyunithi yokusakaza bukhoma. Esikhathini samanani entengo ekhangayo, isisombululo se-LU300 HEVC sihambelana namakhasimende adinga insimu encane yasensimu yevidiyo enhle kakhulu. Njengoba iguquguquke kakhulu, i-LU300 nayo ingasebenza njenge-encoder yevidiyo yangempela noma isetshenziswe njenge-LiveU DataBridge mobile hotspot yokuxhumana okujwayelekile ensimini.
I-1U 4K HEVC rackmount, i-LU610 4K HEVC yezimoto nezindawo ezihleliwe. Le encoder enamandla, esekelwe ubuchwepheshe be-LU600 4K HEVC ye-LiveU, inikeza isixazululo esiphelele se-SNG yamaloli, i-point-to-point kanye nokusabalalisa kwephuzu-kuya-multipoint.
Sizobe siboniswa okwakamuva Izinhlelo zokusebenza zokukhiqiza ekhaya kubakhiqizi bezemidlalo nabaphilayo abafaka phakathi:
I-Tally Light - okwenza kube lula ukuhlangabezana nesipiliyoni se-studio bukhoma ensimini, leli thuluzi elisha elibalulekile lenza abezindaba bezinsimu bazi ngokushesha lapho behlala emoyeni ngombonakaliso wokukhanya obomvu oxhunywe kwi-unitU LiveU.
I-LiveU Graphics - ithuluzi lokukhiqiza ifu eliphezulu lochwepheshe lokusebenzisa ifulethi yokwengeza ihluzo ezishisayo ukuze ziphile ngokusakaza. Abasebenzisi bangakwazi ukumane ukhethe kusuka kuzifanekiso zezifanekiso ezilungele ukuzisebenzisa noma ukudala ukuklama kwazo futhi basakaze ngqo kunoma yimuphi umphakathi wezokuxhumana noma i-CDN.
Ukuvumelanisa kwe-AV nokusekela kuze kube yiziteshi zomsindo ze-8
Ukulawula i-LiveU - ukuvumela ukulawula okulula okulula kweyunithi ye-LiveU nge-Smartphones
Ngokulinganiswa kokuqeda kokuphela kokuphela, Ukukhiqizwa Kwekhaya Okukude Okubukhoma ku-LiveU kuvumela izenzakalo eziningi ukuthi zihlanganiswe ne-logistics elula nokunciphisa izindleko. Izenzakalo ezibukhoma zekhamera eziningi zingenziwa kusuka ekamelweni lokulawula i-Studio studio esikhundleni sokukhiqiza okubizayo kusayithi satellite amaloli.
Ubuchwepheshe be-LiveU e-FIA World Rally Championship
YENZISA: Ifu eliphakathi kwe-AI nokuningi
Ukushayela okuqukethwe okunenjongo, I-LiveU AI unikeza insizakalo ye-AI yezindaba-cent for global gathering gathering. Isevisi ephelele, enikwe amandla yi-newsbridge, inikeza isethi eningi yokunikela kanye namathuluzi wokukhomba amavidiyo ase-AI ukuze kuthuthukiswe, kusetshenziswe futhi kufinyelele okuqukethwe okubukhoma noma okusekelwe kwifayela. Ukusebenza ngaphakathi kwesikhulumi sokuphatha ifu le-LiveU, i-LiveU AI izokwenza ukuba abahleli bafune futhi bathole imidwebo yabo edingekayo ngokushesha kunanini ngaphambili, behlise umsebenzi wabo wansuku zonke futhi benze ukukhiqizwa kwesikhathi sangempela kuphumelele kakhulu.
Sizophinde sibonise isici sethu esisha se-LiveU Central, i-Single Sign On (SSO) ye-SingleShow On (SSO) yokuphathwa komsebenzisi okuphephile, kuhlanganiswe nencwadi esebenzayo yamakhasimende noma Identity njenge-Service (IDaaS).
KUKHULULELA: Ukusabalalisa kwevidiyo ye-IP
I-LiveU Matrix iyisiteji sokusakaza ividiyo se-LiveU sika-LiveU, esanda kukhethwa yi-CBS Newspath. I-matrix inikeza isevisi ye-curation esebenza kahle kakhulu, inika amandla abaphathi bamaminithi wezindaba ukuba banikeze ngokushesha futhi kalula banikeze amakhulu abantu abathintekayo ukungena okungalinganiselwe kokudla okubukhoma kusuka kumayunithi e-LiveU emkhakheni neminye imithombo ngaphandle kokuphazanyiswa, izinsiza ezengeziwe noma izimali ezibiza. I-matrix nayo inhle kakhulu kubakhiqizi bezemidlalo abafuna ukuhlala imicimbi yokusakaza kalula futhi ebiza ngempumelelo ezindaweni eziningi nezindawo ze-TV.
I-Globecast ye-IBC 2019 kuqala - Julayi 15, i-2019
I-RASCULAR IBC 2019 PREVIEW - Julayi 12, i-2019
I-LIVEU IBC 2019 PREVIEW - Julayi 10, i-2019
4K 5G AI iselula eboshelwe Ukuhlanganiswa kweselula I-Cobalt Encoder Umnikelo HEVC i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw SJGolden - I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows umbhalo we-subtitling, i-Digital Nirvana, ukuqapha imidiya, i-IBC I-TVU Izinethiwekhi I-Ultra HD Forum esingokoqobo virtual	2019-07-10
Ngaphambilini: I-RED BEE MEDIA IQALA UKUTHUTHA OKUQALA KWE-RED LAB E-HILVERSUM, E-NETHERLANDS
Olandelayo: Umhleli wevidiyo